बिहान अप गर्न समय छ, र मात्र कुनै पनि जटिल Hairstyles को निर्माण मा, सबै भन्दा छैन पनि गर्भधारण गर्न दैनिक जीवनमा सामान्यतया बल्लतल्ल पर्याप्त समय bustle मा आधुनिक महिला। Ponytail फिर्ता वा लट pigtail सरल अंकमा - र अगाडि, काम गर्न! तर धेरै महिला छैन यस्तो Hairstyles, पत्रिका को कवर मा शीर्ष मोडेल जस्तै, यो निर्माण गर्न सजिलो केही मिनेट छ भनेर पनि थाह छन्। प्रकाश बाल कसरी बनाउन सिक्न, कुनै पनि विशेष ज्ञान र सीप, न त स्टाइल उत्पादनहरु को एक ठूलो संख्या आवश्यक छैन।
केश को थोक बाहिर निकाल्न र यसको आधार मा उनको गम को एक सानो खण्ड र्याप भने सबै भन्दा साधारण "घोडा" पुच्छर कायापलट। को Strand को टिप तिमी सिर्फ अदृश्य समाधान गर्न आवश्यक छ।
केश मा पनि सजिलो गडबड ध्यान छलफल हुनुपर्छ। फोम वा mousse एक बिट - र छोटो कपाल मात्रा बढाउनका हुनेछ। तपाईं गरिनेछ सक्षम बनाउन सजिलो Hairstyles मा आफ्नो स्वाद, छोड्दै केही vybivshimisya pryadok। यो मात्रा को nape मा बाल दिनेछु जो rims को एक किसिम, प्रयोग गर्न धेरै सुविधाजनक छ। एकै समयमा कुनै पनि सजावटी तत्व संग रिंग पोशाक आभूषण को भूमिका निर्वाह गर्नेछ।
लामो कपाल को मालिक, तपाईं braids रोचक चुल्ठो गर्न सक्नुहुन्छ। पनि एक साधारण स्पाइक एक परिष्कृत केश मा गरिएका गर्न सकिन्छ। बुनाई braids यो loosen र कारण थुक्नु को कमजोर गर्न यो एक सानो बाल समतल, रूपमा थप मात्रा र बनावट प्राप्त।
विभिन्न पनि छन् बुनाई को प्रकार तपाईंले घरमा प्रदर्शन गर्न सक्छन् भन्ने राम्रो सजिलो Hairstyles छ - यस्तो फ्रान्सेली plait र चुल्ठो "fishtail" को रूपमा braids। मात्र तपाईं फिर्ता मा परंपरागत तिनीहरूलाई चुल्ठो गर्न सक्नुहुन्छ, तर पनि केही braids, asymmetrically वा टाउको वरिपरि बिछाउने गर्न।
प्रकाश Hairstyles घरमा गर्न सकिन्छ, र लामो कपाल लागि। अर्को विकल्प - पानी तिनीहरूलाई भिजेको गर्न र चुल्ठो एक रोटी मा पछि भेला वा तिनीहरूले यो सैलुन कल रूपमा, "रोटी"। बिहान, सुकाएपछि, तपाईंको कपाल प्राकृतिक कर्ल कर्ल हुनेछ। बाल अतिरिक्त मात्रा कपाल दिन केही "gulek" मा फसल काट्न सकिन्छ।
एक लोचदार ब्यान्ड संग रिम को मद्दतले घरमा रोचक प्रकाश Hairstyles निर्माण गर्न सकिन्छ। रिम राम्ररी कंघी कपाल धारण गर्न सकिँदैन - तिनीहरू उठाएर गरिनेछ गम को खर्च मा र तपाईं स्टाइल प्रयोग बिना शानदार मात्रा हासिल गर्नेछ।
तपाईं shag देखि निर्माण गर्न सक्छन् मूल केश, एक प्राचीन सदृश हुनेछ जुन। त्यसैले, अब लोकप्रिय "ग्रीक" सैलुन प्रकाश। तिनीहरूलाई सिर्जना गर्न, रिम पनि राखे, तर बाँकी छाडा बाल टक को गम अन्तर्गत।
घुम्रेको कपाल को भाग्यमानी मालिकहरूले कर्ल लागि विशेष हेरविचार आवश्यकता छैन। केही zakolok- "केकडे" संग फिर्ता मा बाल उचाल्न र एक बन्डल तिनीहरूलाई मार्न। केही मुक्त किसिमहरु आफ्नो दिन केश प्रकारको थोरै लापरवाही।
क्लब मा एक पदयात्रा लागि सजिलो फिट, साथै दैनिक जीवन को लागि फेसनदार Hairstyles। को bangs बारम्बार दाँत संग comb अलग, अलिकति यो nacheshite र यसलाई "अदृश्य" nachosannuyu माथि Strand मार्न।
को होसियार रहनसहन र groomed सुन्दर कपाल साथै, कुनै पनि महिला मुस्कान र चमक आँखा सजाउनु। यसलाई कुनै पनि अवस्थामा ठूलो देखिन्छ - यो एक महिला को विशेष अधिकार छ।
आधुनिक दोकान मा अफ्रिकी केश
Stretching रंग - बाल रंग प्रविधी (विवरण, फोटो)
कुनै पनि अवस्थामा बाहिर मदत गर्न स्पाइक, एक पक्ष गर्न लट,!
कपाल हटाउने मुद्दा: प्रविधि, लाभ र बेफाइदा
भुकम्प को epicenter - भुकम्प एक परिमाण ...
एलर्जी शट "Diprospan": आवेदन र समीक्षा
अण्डा साथ काट्लेट: धेरै बर्तनहरू
कसरी "वचन 2007" मा पाठ खोल्न: तीन तरिका
Childbirth भत्ता। डिजाइन नियम
"मंगलबार अझै जीवन" Petrov-Vodkin: वास्तविकता संग चित्र र जडान को वर्णन
मस्तिष्क आघात: रोगी मदत गर्न के?
तपाईंको आफ्नै हातले एक हार कसरी बनाउने? मास्टर वर्ग बुनाइ को सरल प्रविधी सिक्न हुनेछ